Karantiil: waxaa la joogaa waqtigii aad shaqo tagi lahayd | Martech Zone
Arbacada, Maarso 18, 2020 Arbacada, Maarso 18, 2020 Douglas Karr
Tani waa, shaki la'aan, jawiga ganacsi ee aan caadiga ahayn iyo mustaqbal shaki leh oo aan soo arkay intaan noolahay. Taasi waxay tiri, Waxaan daawanayaa qoyskeyga, asxaabteyda, iyo macaamiishayda oo u kala baxa dhowr wado:
Cadho - tani waa, shaki la'aan, tan ugu xun. Waxaan daawanayaa dad aan jeclahay oo aan ku ixtiraamo xanaaq kaliya oo aan ku dhaleeceynayo qof walba. Ma caawinayso waxba iyo cidna. Kani waa waqtigii naxariis lahaan lahaa.
curyaannimo - dad badan ayaa qaba a sug oo arag aragtida hadda. Qaar ka mid ahi waxay sugayaan in la soo badbaadiyo… waxaana ka baqayaa in cidina aysan halkaas joogin inay taas dhacdo.
Work - Waxaan daawanayaa kuwa kale oo qodanaya. Iyadoo dakhligoodii aasaasiga ahaa uu jabay, waxay raadinayaan waxyaabo kale oo lagu badbaado. Kani waa qaabkaygu - Waxaan ka shaqeeyaa habeen iyo maalin qaadista durdurro kale oo dakhli ah, dhimista kharashyada, iyo kordhinta ilaha i soo hadhay.
Iyada oo tafaariiqda iyo xafiisyaduba xidhan yihiin si ay u jaleecaan qalooca ugana fogaadaan bulsho ahaan si loo yareeyo faafitaanka Fayras Corona, dadku ma haystaan ​​ikhtiyaar aan ka ahayn inay gurigooda joogaan. In kasta oo ay tani duugi karto ganacsiyo badan, haddana ma caawin karo laakiin waxaan la yaabaa sababta shirkaduhu u ahaan la’yihiin go'aamiye iyo ka faa'iideysiga waqtigan fikirka, hal-abuurka, iyo hirgelinta.
Mid ka mid ah macaamiishayda muhiimka ah waa inuu ii oggolaado inaan tago si aan u badbaadiyo dakhligooda oo kaliya ku tiirsan iskuullada. Maamulaha guud ayaa si shaqsi ah ii soo wacay si aan u sharaxo xaalada. Waxay ahayd inuu ilaaliyo shirkadiisa. Shaki iigama jiro inuu ahaa go'aanka saxda ah waxaanan u ogeysiiyey taas, aniga oo aan wax qiimo ah ku fadhiyin, inaan diyaar u ahay wax kasta oo kala guur ah ama fulin ah oo iyaga caawin kara.
Macaamiilkan gaarka ah ayaa hadda bilaabay alaab toos u-macaamil. Waan ka gaabinay oo waan ka fiirsanayn si aanan kor ugu qaadin badeecada si aan u tijaabino una wanaajino adeegsiga isla markaana aan u hubinno inay si sax ah ugu dhexjirtay shaqadooda wax soo saar. Waxaan la wadaagay kooxdiisa in tani ay tahay waqtigii ugu fiicnaa ee gaaska lagu kaco, in kastoo. Waa tan sababta:
Rabshad Yar - shaqaalaha qalfoofka iyo amarada ugu yar ee soo socda, bilaabida softiweerka otomatiga suuq geynta si kor loogu qaado badeecada ayaa carqalad yar ku noqon doonta shaqaalahooda. Waxay sifiican ula tacaali karaan qulqulka arimaha ku saabsan soo saarista sheyga cusub iyo nidaamyo cusub oo lagu taageerayo.
Waqtiga Waxbarashada - iyada oo shaqaaluhu ka shaqeynayaan guryahooda, awoodin inay ka qayb galaan shirarka, oo aan lagu mashquulin arrimaha xafiiska, shaqaaluhu waxay leeyihiin waqti aan caadi ahayn oo ay kaga soo qayb galaan tababarka iyo hirgelinta xalalka ay u baahan yihiin. Waxaan u diyaariyey demo shaqaalaha gudaha inay ka soo qayb galaan waxaanan ku dhiirrigeliyey iibiyeyaashayda inay ka caawiyaan inay jadwal u sameeyaan waqtiga ay ka soo qayb galaan
Nidaamka otomaatiga - Ma aaminsani inaan waligeen ku laaban doonno ganacsiga sidii caadiga ahayd dhacdadan kadib. Waxaan la kulanay hoos u dhac dhaqaale oo caalami ah, fiirin lagama maarmaan u ah go'doominta silsiladaha sahayda, iyo shaqo ka joojinta suurtagalka ah si looga ilaaliyo shirkadaha inay hoos u dhacaan. Tani waa waqtigii ugu fiicnaa ee shirkaduhu ay maalgashi xoog leh samayn karaan ayna hagaajin karaan qulqulka shaqadooda si ay u sii wadan karaan wax soo saarka iyagoo hoos u dhigaya qiimaha.
Shirkadaha: Waa Waqtigii Aad Shaqada Aadi Laheyd
Waxaan ku dhiiri galin lahaa shirkad kasta oo halkaa ka socota inay shaqo tagto. Shaqaalahaagu waxay ka shaqeynayaan guriga, waxay leeyihiin isku xirnaan, waxayna ku mashquulsan yihiin hirgelinta iyo tababbarka goobaha cusub. Isku-dhafka iyo kooxaha fulinta waxay si weyn u shaqeeyaan maalmahan, sidaa darteed qandaraaslayaashu waxay diyaar u yihiin si aan horay loo arag inay ku caawiyaan. Shirkadayda, Highbridge, waxay la imaaneysaa xoogaa fikrado is-dhexgal ah si loola kulmo xalalka sirdoonka si looga caawiyo shirkadaha jawiga shaqada fog.
Shaqaalaha: Waa Waqtigii Aad Dooneysid Mustaqbalkaaga
Haddii aad tahay shaqsi mushaarkiisu khatar ku jiro, waa waqtigii aad ku bood lahayd. Haddaan, tusaale ahaan ahaan lahaa baarka ama adeegaha… Waxaan ka boodayaa khadka tooska ah iyo barashada xirfado cusub. Waad sugi kartaa dammaanad-qaad, laakiin taasi waa gargaar… maaha xalka muddada-dheer ee dhibaatadaada. Warshadaha teknolojiyadda, tani waxay iska diiwaan gelin kartaa bilaash Koorsada Trailhead on Salesforce, qaadashada qaar ka mid ah fasalo lambarro bilaash ah oo khadka tooska ah ah, ama barashada sida loo furo dukaankaaga gaarka ah ee Etsy.
Waqtigaan lama joogo Playstation iyo Netflix. Waqtigaan maahan in la xanaaqo ama la curyaamo. Qofna ma joojin karo xanaaqa Dabeecadda Hooyo. Tani ama dhacdo kale oo masiibo ah ayaa ahayd lama huraan. Waqtigaan ayaa ah waqtigii looga faa'iideysan lahaa nolol maalmeedkeenna oo la carqaladeeyay si aan horay ugu socono. Dadka iyo shirkadaha ka faa'iideysanaya hadda waxay u kici doonaan si ka dhakhso badan sidii ay weligood malayn jireen.
Aan shaqo tagno!
Tags: qalabayntaFayruuska coronaCOVID-19carqaladaynEducationmasiibojawaabta faafida
Maxay Sababta Xawaareynta Websaydhku u Muhiim tahay iyo 5 Dariiqo oo loogu Kordhiyo